Ulaagaalee - LibreOffice Help
Baafata Deetaa - Ciimina - Ulaagaalee caancala jedhu filadhu
2 Man'eewwaan duwwaa hayyami
3 Tarree filannoo agarsiisi
3.1 Galti oliin tartiiba qabsiisi
Gatiiwwaan hunda Hin daangeffamne.
Lakkoofsa hundaa Lakkoofsota hundaa qofatu ulaagaan walgita.
Kurnyee Lakkoofsootni hundi uulaagaan wal gitu.
Guyyaa Lakkoofsotni hundi ulaagaa sana guutu.Gatiwwaan galan kunis kan isaan dhangaa'aan akkaataa qaaqni itti aanun dhufu waamamunidha.
Yeroo Lakkoofsotni hundi ulaagaa sana guutu.Gatiwwaan galan kunis kan isaan dhangaa'aan akkaataa qaaqni itti aanun dhufu waamamunidha.
Hangii man'ee Gatiwwaan hangii man'ee keessati qofa kennaman eeyyama.Hangii man'ee tokko tokkoon ifteessuun,ykn hangii deetaa teessoon maqeessuu,ykn hangiin maqeessuu.Hangiin kunis tari tarjaa ykn tarree man'eewwaani tokkoo of keessaa qabachuu danda'a.Yoo dhangii tarjaawwani ykn tarreewwaani ifteessitee,tarjaa duraa qoofa fayyadamna.
Tarree Gatiiwwaan ykn diraawwan tarree keessatti eeraman qofa hayyami.Lakkoofsota gatii isaanii madaalun,kanaafuu yoo lakkoofsa 1 tarree keessa galchite,galfanni 100% gitaa'a dha.
Dheerina barruu Galfata dheerinni isaa ulaagaa kennamee gute.
Gatiiwwaan keessaa filachuuf ykn tarree diraawwaan gitaa'aa ta'an agarsiisa. Tarree kan bannu dandeenyu man'ee filuun itti ansuun Ctrl+D dhiibuu (Mac: ajaja+D).
Oggeejjii wal madaalaa kan itti fayyadamuu barbaaddu galchi. Ogeejjiin jiruus sanduuqa Hayyami ati filattee irratti hunda'a. Yoo "gidduu" ykn "gidduu miti",sanduuqni naqii Gadaantoo fi Olaantooni mul'ata. Kan kanaan alaa,sanduuqotni naqi Gadaantoo, the Olantoo,ykn gatiisa qofa mul'isa.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.3/Calc/Criteria/om&oldid=960890"
This page was last edited 22:14:39, 2014-10-19 by LibreOffice Help user WikiSysop.